Afsoomaaligu Gaylan Buu Ku Jiraa: Ma Badbaadi Doonaa?!
Tuesday 8th January 2019 08:53:07 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Burco
"Haddii la doonayo in ummad la dilo, afkeedaa lagu horreeyaa oo marka hore la dilaa"!
"Maxaa gabay tilmaannaa
1. "Doonni badda quustay oo dadkii saarnaa ku le’deen!”
2. "Diyaarad hawada ku gaddoontay!”
3. "Weftigii madaxweyanaha oo dalka ku soo guryo noqday!”
4."Guddoomiyaha gobolka oo bogaadin iyo hambalyo guudka kaga tuuray xildhibaannada golaha degaan ee doorashada ku guulaystay!”
5."Weftiga madaxweynuhu waxa uu cagta soo mariyey degaanno ka mid ah Gobolka Maroodijeex!”
6. "Waxa uu madaxweynuhu ka dhawaajiyey ama ka sanqadhiyey!”
7."Roob oo wayn ayaa maanta Beledweyne ku biyo-baxay!”
• Doonnidu ma quusto ee way degtaa ama halligantaa. Quusiddu waa ula kac iyo bilcaanni oo waxa sameeya qof dabbaalanaya ama qujis obocda badda ku maqiiqan.
• Diyaaraddu hawada kuma qallibanto ee way ku burburtaa.
• Guryo noqosho waa arrin taban iyo hungo. Xoolaha, gaar ahaan adhiga iyo maqasha, ayaa guriga laga guuro ku soo dalanbaabi noqda marka ay lumaan, qofka xoolo hunnada ahna waa loo adeegsan karaa, hase yeeshee wefti maqnaa oo soo laabtay haddii "guryo noqosho” loo adeegsado waxa ay la macne tahay in ay hungo la soo noqdeen!
• Nacdal iyo cambaarayn baa guudka la iskaga tuuraa ee bogaadinta iyo hambalyada waa la isu diraa ama hibeeyaa.
• Col iyo cadaawe ayaa cagta wax soo mariya ee weftigu degaannada booqasho ayuu ku soo maraa ama soo gala bixiyaa.
• Erey-afeedka ama hadal laga ma dhawaajiyo ama sanqadhiyo. Aalad ama qalab ayaa laga dhawaajiyaa ama laga sanqadhiyaa. Ereyga ama hadalka waa la yidhaahdaa, waa lagu tiraabaa, waa la carrabbaabaa, carrabkaa lagu dhuftaa, waa la sheegaa, waa la tilmaamaa ama waa laga tibaax bixiyaa.
• Roobku ma biyo baxo ee wuu da’aa!
Qoraal marka ay timaaddana xaalku wuu ka sii daraa oo xagaafka iska qaadsii ayaa dhacda inta badan. Ereyo aan is raaci karin baa la isku xidhiidhiyaa sidan oo kale: "Ugaara, kusocda, lawadasocda, kayimi”! U gaar ah, ku socda, la wada socda, ka yimi ayaa loo baahnaa saw ma aha?!
"Markii aannu apply-garaynay fund-kii project-tigu u baahnaa, waxa attractive noqday aims-kii iyo objectives-kiisii oo ahaa qaar implementation-koodu easy yahay. Therefore waxa uu noqday program successful ah.
"Afqalaad aqoontu miyaa
"Cali Sugulle (Duncarbeed)”
Waxa la yidhaahdaa "haddii la doonayo in ummad la dilo, afkeedaa lagu horreeyaa oo marka hore la dilaa”!
Afka Hebrew waxa uu ahaa af iilka qarkiisa jiifsaday bilowgii qarnigii 19-aad. Waxa uu ahaa af ku hadhay Synogog-yada (Kiniisadda Yuhuudda) iyo Kitaabkooda. Afkaasi waxa uu ka baxay xilligaas adeegsigii maalinlaha ahaa. Suurta gal ma ahayn ayaa laga tibaax bixiyey in afkaasi ereyo u helo "waan ku jeclahay” ama "milixdaas ii soo gudbi iwm.”!
Waddanka Isreal kolkii la abuuray ee Yuhuud kala duwan oo kala af iyo dhaqammo geddisani ku bahoobeen badhtamihii qarnigii hore, ayaa afkaasi mar kale hawada neefsaday oo soo noolaaday, maantana "rabitaan xooggan” ka dib waa af awood leh oo si walba u ciidaminaya.
• machad afka lagu cilmibaadho oo ka dhexeeya Shanta Soomaalidu degto
• waxbarashada hoose ilaa jaamacadaha iyo maamulka xafiisyada Shanta Soomaaliyeed oo Afsoomaaliga laga siiyo doorkiisa mudnaanta koowaad leh
• tayaynta qoraalka afka iyo fidinta awoodda ereygiisa dhigan
• dadka afka ku hadla oo lagu boorriyo qiimaha afkooda iyo hiddesidennimadiisa madhaafaannimo
• Warfidiyeennada, suugaanyannada, abwaannada, fannaaniinta, aqoonyannada iyo cilmi baadhayaasha oo iskaashi ka yeesha daryeelka afka, iyada oo si togan looga faa’iidaysanayo ilaha warfaafineed iyo technology-da casriga ah iwm.
[Daawo Live:-] Dhakhaatiirta Shiinaha Oo Badbaadiyey Qof Nolosha Waayey Muddo Kooban .
Tahriibayaal Afduubtay Markab Kasoo Badbaadiyay Xeebaha Dalka Liibiya & Dareenada Ku Xeeran.
"Ilayn waxba laguma haystee In la daweeyo, oo naftiisa la badbaadiyo oo la qalo xaq buu u leeyahay Sheekh Aadan Sune
Madaxweyne Biixi Oo Dedaal Dheeraad Ah Ku Bixinaya Ka Badbaadinta Xisbiga Kulmiye Siyaasiyiin Hunguri Ka Hayo Xilka Gudd